1100kw မြင့်မားသောစွမ်းအား Diessan Diesel Generator မှတရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သူ 20-0ft ကွန်တိန်နာ - MECCA Power
နေအိမ် / ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း / အမှတ်တံဆိပ်အင်ဂျင် / DoSan / 165 KVA အသံတိတ် Doosan ဒီဇယ်မီးစက် STAMFORD Alternator
165 KVA အသံတိတ် Doosan ဒီဇယ်မီးစက် STAMFORD Alternator
3. ရွေးချယ်စရာ cloud based အဝေးထိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊
၅။Low Failure Rate & Low Maintenance Cost
၆။ အသံတိတ်မီးစက်သည်ဆူညံသံကိုအာရုံခံစားနိုင်သောညအချိန်များတွင်လူနေအိမ်များ၊ ရုံးများနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
7. ထိန်းချုပ်မှု panel တစ်ခုစီ၊ လက်လှမ်းမီသောတံခါးများနှင့် gensets ၏နေထိုင်သူများဒေါင်လိုက်ပန်းကန်သည်မိုး၊ ဖုန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ငယ်များကိုရှောင်ရှားရန်ရေစို၊ ဖုန်လုံ၊ သဲအထောက်အထားနှင့်ဒီဇိုင်းသက်သေခံချက်များကိုလက်ခံသည်။
Dooosan ဒီဇယ်ဆီမီးစက် 20ft ကွန်တိန်နာ 165 KVA Dokosan ဒီဇယ်ဆီ အသံတိတ် Dokosan ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ မြင့်မားသော Power Doosan Diesel Generator အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက် 1100kw Doosan ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ 1100kw မြင့်မားသော power doosan မီးစက် 165 KVA ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ Stamford Alternative Diesel Generator STAMFORD Alternator ဖြစ်သည်